मुटु स्वस्थ राख्न आहार व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? जानौं...
मुटु स्वस्थ राख्न आहार व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? जानौं...
२०७६ भदौ ८ आइतबार १५:२०:००
शरीरलाई आवश्यक्ताभन्दा बढी क्यालोरीयुक्त आहार प्राप्त भएमा शरीर तथा रक्तनलीहरुमा बोसो जम्न गई धेरै प्रकारका रोग उत्पन्न हुन्छन् । मुटु र शरीरलाई स्वस्थ राख्न दैनिक सन्तुलित आहार लिनु आवश्यक छ । एक वयस्क तथा साधारण शारीरिक कार्य गर्ने ७० किलो वजन भएका व्यक्तिलाई दैनिक दुई हजार कयालोरीयुक्त आहार आवश्यक पर्छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत कार्बोहाइड्रेडबाट, ३० प्रतिशत चिल्लो पदार्थबट र २० प्रतिशत प्रोटिनबाट उपलब्ध भएको हुनुपर्छ । मानिसको शारीरिक अवस्थाअनुसारको यस्तो आहार आवश्यक पर्छ । कार्बोहाइड्रेड, चिल्लो, प्रोटिन, भिटामिन र लवण आवश्यक्ताअनुसार खानाबाट प्राप्त गर्नुपर्छ ।
मुटुरोग नियन्त्रणका लागि सेवन गर्नुपर्ने उपयुक्त आहारबारे महत्वपूर्ण जानकारी यस्ता छन् :
१. घ्यू, तेल तथा अन्य चिल्लो परिकार जति सक्यो कम प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । खाना पकाउनका लागि शुद्ध तोरीको तेल नै उत्तम हुन्छ ।
३. बिहान–बेलुकीको खानामा हरियो साग हुनु अत्यन्त लाभदायी हुन्छ । दैनिक कम्तीमा एकपल्ट फलफूल खानुपर्छ ।
४. बेलुकीको खानामा दुईदेखि तीनवटा सुक्खा रोटी, साग र मौसमी तरकारी हुनुपर्छ । बेलुकीको खाना ८ बजेभित्र खाइसक्नुपर्छ । बिहान एक छाक मात्र भात खाने गर्नुपर्छ । खाना सबैका लागि एकैनास हुँदैन । धेरै शारीरिक श्रम गर्नेले धेरै खानुपर्छ, थोरै गर्नेले थोरै खानुपर्छ । बेलुकीको खाना खाएपछि तुरुन्त सुत्नु हुँदैन । कम्तीमा दुई घन्टापछि मात्रै सुत्नुपर्छ ।
५. शाकाहारी हुनु मुटुका लागि फाइदाजनक छ । तर, नियन्त्रित रुपमा माछा–मासु खाएमा हानि हुँदैन । माछा र कुखुराको मासुले कोलेस्ट्रोल कम बढाउँछ । माछा–मासु बिहान र दिउँसोको खानमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । बेलुकी माछा नखानु उत्तम हुन्छ ।
६. खानामा फाइबरयुक्त खानाहरु गहुँ, गेडागुडी, हरियो सागपात खानुपर्छ । गेडागुडीलाई अंकुरित रुपमा खानु अझ बढी लाभदायक हुन्छ । फापर, कोदो, जौ, मकै आदिले पनि मुटुलाई फाइदा गर्छ ।
७. खाना थोरै–थोरै तर धेरैपटक खानु उचित हुन्छ । दुई छाक खाने तर पेट कसेर खाने अनि खानेबित्तिकै सुत्ने बानी मुटुका लागि अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ । आहार व्यवस्थापन भन्नाले यस्तो बानी त्यागी थोरै खाने, धेरैपल्ट खाने र उचित खाना खाने बानी बसाल्नुपर्छ ।
८. बेलुकीको खानामा काँचो लसुन खाँदा राम्रो हुन्छ । यसले रगतको कोलेस्ट्रोल घटाउँछ । साथै, एस्पिरिनले जस्तै रगतलाई पातलो पार्दछ । ९. मधुमेह रोग भएकाहरुले गुलियो खानु हुँदैन ।